WhatsApp တွင်အလုပ်လုပ်သောနည်းလမ်း (၆) ခုအားစကားဝှက်ကိုမည်သို့သွင်းရမည်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဒန်နီရယ် Terrasa | | social networking, WhatsApp ကို
WhatsApp ကို ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ အများစုကို၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားပြောဆိုမှုများနှင့်စကားပြောအုပ်စုများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်ကာကွယ်လိုသောလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များစွာရှိသည်။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းရှိပါသလား။ အဖြေကဟုတ်တယ်။ ကျနော်တို့ရှင်းပြပါမယ် WhatsApp ကိုဘယ်လိုစကားဝှက်ထည့်မလဲ။
လစဉ်အသုံးပြုသူတစ်ဘီလီယံကျော်သည် WhatsApp ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးသက်သေဖြစ်သည်။ ဤလျှောက်လွှာသည်eအသစ်နှင့်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှချက်တင်၊ အသံ၊ အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုထည့်သွင်းထားပါသည်။ စာရွက်စာတမ်းအမျိုးမျိုး၊ GIFs၊ တည်နေရာစသည်တို့ကိုဝေမျှနိုင်သည်။
WhatsApp ကို Web မှအကောင်းဆုံးရယူရန်အတွက်အဓိပ္ပါယ်လမ်းညွှန်
သို့သော်အတော်လေးမကြာသေးမီကသည်အထိလမ်းမရှိသောဖြစ်ခဲ့သည် သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါ စကားဝှက်၊ PIN နံပါတ်သို့မဟုတ်အလားတူကိုအသုံးပြုခြင်း။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုသိသာထင်ရှားသည့်အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်စေပြီး၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုသူများကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူလျှိုသို့မဟုတ်အတင်းအဖျင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝိုင်းများကိုဖတ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များကိုပင်သိနိုင်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဤပြproblemနာအတွက်ကောင်းသောအဖြေများရှိသည်။ လျှောက်လွှာကိုယ်တိုင်မှသာမကပြင်ပအရင်းအမြစ်များမှလည်းပါ ၀ င်သည် ဒီကွာဟချက်ကိုဖြည့်ရန်လုံလောက်သောအခြားနည်းလမ်းကိုဆက်ကပ်။ WhatsApp သို့စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအချို့အတွက်အဖြေများရှိသည်။
1.1 စကားပြောဆိုမှု archive ကို
1.2 မျက်နှာပြင်သော့ခတ် function ကို
2 ပြင်ပ application များနှင့်စကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်ပါ
2.4 CM လုံခြုံရေးအသုံးချမှု
3 သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် WhatsApp ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကအကြံဥာဏ် - အစည်းအဝေးအားလုံးကိုပိတ်ပါ
2019 update တွင်, နောက်ထပ်လုံခြုံရေးအဆင့်ကိုပုဂ္ဂလိက WhatsApp ကိုပြောဆိုမှုများမှထည့်ပြီးပါပြီ။ ၎င်းတွင်ဥပမာအားဖြင့်၊ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်လျှောက်လွှာပါအကြောင်းအရာများကိုကာကွယ်ရန် PIN၊ လက်ဗွေသို့မဟုတ်မျက်နှာမှတ်ပုံတင်သောခလုတ်ကိုထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အမှန်တရားမှာအသစ်ဖြည့်စွက်မှုများနှင့်အတူ WhatsApp သည်၎င်းနှင့်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ဤအချိန်တွင်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏အဆက်အသွယ်များနှင့်စကားစမြည်ပြောခြင်းများ၏ privacy ကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည်။
စကားပြောဆိုမှု archive ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ချက်တင်များ၏သီးသန့်ဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်တရားမျှတမှုအတွက်သာကန့်သတ်ထားနိုင်သည် အချို့သောအဆက်အသွယ်များသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြောဆိုမှုများ။ ဤကိစ္စတွင်လျှောက်လွှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသည့်ရွေးစရာတစ်ခုရှိသည် ဒီအချက်အလက်ကိုဖုံးကွယ် စကားဝှက်များမသုံးပဲအခြားသူများ၏အမြင်များ
WhatsApp ကိုစကားပြောဆိုမှု archive ကို
ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာသည်သီးသန့်တည်ရှိမှု၏အာမခံချက်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆို၍ မရသောစနစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်လုံခြုံရေး၏ပထမအဆင့်အဖြစ်အတော်လေးလက်တွေ့ကျနိုင်သည်။ ဒါက WhatsApp ပြောဆိုမှုများကိုသင်ဘယ်လိုသိုဝှက်သိမ်းဆည်းနိုင်သလဲ။ အဆက်အသွယ်များကိုဖုံးကွယ်ရန်လည်း၎င်းသည်:
Android တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖုံးကွယ်ချင်သောစကားပြောဆိုမှုသို့မဟုတ်စကားပြောဆိုမှုများကိုရိုးရိုးလေးရွေးပြီး menu ထဲရှိဖိုလ်ဒါပုံစံအိုင်ကွန်ဖြင့်ပေါ်လာသည့် "archive" ရွေးစရာကိုအသုံးပြုသည်။ ဤစကားစမြည်ပြောဆိုမှုများကိုပြန်လည်ရယူရန်အချိန်မရွေး "archive လုပ်ထားသောချတ်" ဖိုလ်ဒါသို့ကျွန်ုပ်တို့သွားနိုင်သည်။
iOS / iPhone ပေါ်မှာဖြေ - ကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်ချင်တဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုရှာတယ်။ ၎င်းကိုဘယ်ဘက်သို့ရွှေ့သောအခါ "archive" option ဖြင့် menu ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ရွေးချယ်ပြီးပါက၎င်းအားအလိုအလျောက်မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ “ သိမ်းဆည်းထားသောချတ်များ” ဖိုင်တွဲတွင်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်၊ သို့သော်“ unarchive” ရွေးစရာကိုအသုံးပြုပြီးအမြဲတမ်းရနိုင်သည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုဤရွေးချယ်စရာဖြစ်သင့်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည် ရံဖန်ရံခါသာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အဲဒါကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းကမိုဘိုင်းရဲ့သိုလှောင်ရာနေရာကိုအလွန်အကျွံတင်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းသည်၎င်းအားမှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုကိုသဘာဝကျစေသည်။
မျက်နှာပြင်သော့ခတ် function ကို
ဒီ function က iOS နှင့် Android ထုတ်ကုန်များတွင်ရနိုင်သည်။ ၎င်းသည် application configuration options မှသက် ၀ င်ရမည်။ သင်၏အကြောင်းအရာကိုမမြင်ရသောမျက်လုံးများမှကင်းဝေးစေရန်စနစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
function အသစ်ကိုသက်ဝင်စေဖို့၊ အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ -
ပထမ ဦး စွာလိုအပ်သည် WhatsApp ၏နောက်ဆုံး version ကို download လုပ်ပါ App Store သို့မဟုတ် Google Play မှတဆင့်။ ဤသည်ဗားရှင်း 2.19.21 ဖြစ်ပါတယ်။
အပ်ဒိတ်ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်ဖွင့်ရန်လိုသည် setup menu ကို, အဘယ်သူ၏ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ပေါ်မူတည်။ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
မီနူးတွင်၊ ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ "အကောင့်"ရွေးချယ်စရာမြောက်မြားစွာရှိသောစာရင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေမည်။ လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုရည်ညွှန်းသောသော့သည်သေးငယ်သောသော့၏သင်္ကေတဖြင့်အမှတ်အသားပြုသည်။
အောက်တွင်ဖွင့်လှစ်သော menu အသစ်တွင်သင်ရွေးစရာကိုရွေးရမည် "သီးသန့်တည်ရှိမှု", ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံကိုဖျောက်ထားခြင်းကဲ့သို့သောအကောင့်လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သောရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများကိုပြလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ရမည့်ရွေးစရာသည်ရွေးရန်ဖြစ်သည် "ဖန်သားပြင်သော့ခတ်", ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသော့ဖွင့်စနစ်နှင့်၎င်းအားအလိုအလျောက်သက်ဝင်စေမည့်အချိန်ကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
မျက်နှာပြင်သော့ပိတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကို Face ID, Touch ID (iOS နှစ်ခုလုံးတွင်သာ)၊ လက်ဗွေသို့မဟုတ်စကားဝှက်ဖြင့်သာဖွင့်နိုင်သည်။ ငါတို့အရင်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ။
မကြာသေးမီက WhatsApp သည်လည်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် နှစ်ဆင့်အတည်ပြုခြင်းAndroid နှင့် iPhone နှစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုသူအကောင့်များ၏လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော optional တစ်ခု။
ဤကာကွယ်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးပါက၊ အသုံးပြုသူသည်ဂဏန်း ၆ လုံးပါသောစကားဝှက်အားဖြင့် WhatsApp တွင်သူတို့၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုစစ်ဆေးရပါလိမ့်မည်။ ဒုတိယလုံခြုံရေးအဆင့်မှာအီးမေးလ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာမည့်အတည်ပြုချက်ပါရှိသည်။
ဤနည်းဖြင့် WhatsApp သို့စကားဝှက်ကိုမည်သို့သွင်းရမည်နည်း။ ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်
ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ မီနူး (WhatsApp ၏ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ 3-dot အိုင်ကွန်) နှင့် option ကိုရွေးချယ်ပါ "setting".
ထို့နောက်ကိုနှိပ်ပါ "အကောင့်" နှင့် option ကိုရွေးချယ်ပါ "အဆင့်နှစ်ဆင့်အတည်ပြုခြင်း".
နောက်ဆုံးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "enable" သင်ရွေးချယ်သောစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်သင့်ရဲ့အကောင့်အတွက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့အီးမေးလ်လည်းထည့်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်ပ application များနှင့်စကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်ပါ
လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်ဤ application တိုးတက်မှုမတည်ရှိမီ၊ သုံးစွဲသူများစွာသည် WhatsApp သို့စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပုံပြtheနာကြောင့်ပြင်ပ application များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်စနစ်အတွင်းမှာအခြားရွေးချယ်စရာတွေထက်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူများစွာရှိပါတယ် အပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ ဤရွေ့ကားအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြသည်
ဤလျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ချက်တင်များအားကာကွယ်ရန်အတွက်သာမက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းမှမည်သည့်လျှောက်လွှာကိုမဆိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်ပါ.
AppLock တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မည်သည့် application များကိုစကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်လိုသည်ကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းတို့တစ်ခုစီအတွက်မတူညီသောတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Android အတွက်သာရနိုင်သည်။
download link: AppLock
ChatLock + သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်စပ်စုလိုသော "ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု" ကိုကူညီပါ
con ChatLock +WhatsApp ကို PIN တစ်ခုဖြင့်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ chat message များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ ဤ App သည် ChatLock + ၏အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရောက်လာသည် ဖုန်းရဲ့ရှေ့ကင်မရာကိုသုံးပါ WhatsApp ကိုပိတ်ဆို့ရန်ကြိုးစားနေသူ၏ပုံရိပ်ကိုသတိရှိစွာနှင့်တိတ်ဆိတ်စွာရိုက်ကူးပါ။ သူလျှိုကို "အမဲလိုက်ခြင်း" ခံရလိမ့်မည်။ WhatsApp ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကိုမပေးသောဤ sibylline ရွေးစရာသည်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
download link: ChatLock +
အသုံးပြုသူများအတွက် iPhone ကို၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောစကားဝှက်စီမံခန့်ခွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကို master password ဖြင့်လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်စကားဝှက်တစ်ခု။
WhatsApp သို့စကားဝှက်မည်သို့ထည့်ရမည်ဆိုသည်ကိုမေးမြန်းခြင်းအပြင် 1Password သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လည်း login များ၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ WiFi စကားဝှက်များ၊ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအရာအားလုံး။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအပလီကေးရှင်းတွေနဲ့မတူဘဲ၊ ၎င်းသည်ရက် ၃၀ အခမဲ့သုံးနိုင်သည့်စမ်းသပ်မှုပုံစံကိုပေးပြီးနောက်သင်သည်လစဉ်ကြေးယူရို ၂-၃ ခန့် (ဒေါ်လာစျေးဖြင့်တွက်ချက်ထားသည့်အတိုင်းအတိအကျမဟုတ်) ကိုပေးဆောင်ရသည်။
CM Security Applock - လုံခြုံရေးနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်မှု
Android နှင့် iOS နှစ်ခုလုံးအတွက်မှန်ကန်သည်။ CM လုံခြုံရေးအသုံးချမှု ၎င်းကိုအကောင်းဆုံးသောအသုံးချခြင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းရဲ့ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ကလုံခြုံရေးကိရိယာတခုကိုသင့်ရဲ့ကိရိယာကိုပံ့ပိုးပေးရုံသာမက၊ built-in ဗိုင်းရပ်စ်။
လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းပြီးပါကမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အသိပေးချက်များ၊ ဒေါင်းလုပ်စသည်တို့၏အကာအကွယ် settings အားလုံးကိုအလွယ်တကူသတ်မှတ်နိုင်သည်။
download link: CM လုံခြုံမှု Applock
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် WhatsApp ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကအကြံဥာဏ် - အစည်းအဝေးအားလုံးကိုပိတ်ပါ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးအကြံပြုချက်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp ကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသုံးပြုပြီး၎င်းကိုထပ်မံအသုံးပြုရန်မစီစဉ်ပါကပညာရှိရာရောက်သည်။ အစည်းအဝေးအားလုံးကိုပိတ်ပါ ငါတို့ဖွင့်ပြီ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုပိတ်လိမ့်မည်။
အစည်းအဝေးအားလုံးကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။ အလွန်ရိုးရှင်း: ငါတို့အပိုင်းကိုဝင်ရောက် WhatsApp ကိုက်ဘ် နှင့် option ကို၌တည်၏ «အစည်းအဝေးများ» ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံ၍ အသုံးမပြုတော့သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ပစ်ပါမည်။ ပြီးတော့သံသယဖြစ်တဲ့အခါ၊ အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » WhatsApp ကိုစကားဝှက်ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲ
Instagram ကိုဘယ်လို timer သတ်မှတ်မလဲ